Muuqaalka Bogga Ma Dhiman doono | Martech Zone
Muuqaalka Bogga Ma Dhiman doono
Sabtida, Diisambar 2, 2006 Jimco, Oktoobar 24, 2014 Douglas Karr
Waan ixtiraamayaa Steve Rubel, laakiin kuma raacsani qoraalkiisa imika ee uu ku sheegayo dhimis dhaw ee aragtida bogga by 2010. Steven wuxuu leeyahay:
Bogaggan waxaa lagu dhisi doonaa Ajax, Flash iyo tikniyoolajiyado kale oo is-dhexgal ah oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu arrimaha ku qabto dhammaan bog hal bog ah - sida Gmail ama Google Reader. Tani waxay tirtiraysaa baahida loo qabo in laga gujiyo hal bog bog kale. Fidinta websaydhka ayaa tan kaliya dardar galin doonta.
Tani gabi ahaanba maahan kiiska gebi ahaanba. Dhamaan kuwa waaweyn Analytics isticmaaleyaashu waxay leeyihiin qaab ay ku dhexgalaan aragtida bogga adoo adeegsanaya qoraalka dhinaca macaamiisha. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa Analytics warshadaha ayaa ahaa ka hor ee qalooca, anigoo ka soo wareegay qorista-qorista una gudbay dhinaca macmiilka dhinaca qoraalka sannado ka hor. Hadda, waxay bixiyaan awood ay dib ugu soo celiyaan doorsoomayaasha Analytics matoor si sax ah u aqoonsada isdhexgalka macmiilka.
Waxaan sheegi doonaa in qeexitaanka 'bog' isbadali doono. Bog wuxuu noqon karaa qayb ka mid ah bog, widget, quudin, iwm. Isdhexgalka macmiilka ayaa wali si sax ah loogu sawiray qaabkan, in kastoo. Halka macmiilku riixi lahaa xiriiriye oo uu haysto bog cusub oo horay u soo muuqday, hadda waxay riixayaan xiriiriye oo mawduuca la beddelay. Tani weli waa isdhexgal waxaana loo cabbiri karaa si waxtar leh.
Isticmaalka RSS waxaa si sax ah loogu cabiraa codsiyada sida Feedburner, oo quudintaada u weeciya mashiinkooda cabirka. Widgets-ku waxay soo saaraan makiinadohooda "Analytics", sida halkan lagu arkay MuuseStorm. Flash wuxuu ka faa'iideysan karaa mid kasta / dhammaan isdhexgalkaas Analytics shirkadaha.
Case in dhibic: Xisaabiyaha Lacagta (mid ka mid ah boggeyga), waxaa lagu dhisay Ajax. Marka isticmaalehu uu gujiyo "Xisaabi" oo aan ku shubo xisaabinta la dhammaystiray bogga asalka ah, waxaan u gudbiyaa macluumaadkaas Google Analytics. Markii aan daawado Google Analytics, waxaan si sax ah u arki karaa inta qof ee booqatay goobta, iyo sidoo kale inta 'bogag aragtida' ah ee la fuliyay. (Xaqiiqdii ma qabanayo xisaabinta, in kastoo!).
Saadaashayda? Marka la gaadho 2010, shirkadaha falanqaynta ayaa si sax ah u sawiri doona muuqaalada bogga wixii adeegsi guud ama aan caadi ahayn ah ee ka kooban mawduucaaga ama bartaada Flash Flash, Ajax, ama Widgets. Saacaddu waxay kuxirantahay barnaamijyadan-saddexaad ee imminka sidan sameeya. Waa maxay doono isbeddelku waa fahamkeena waxa 'aragtida bogga' runti yahay. In kasta oo loo arko inay tahay bogga biraawsarka oo dhan kahor, hadda waxay noqon doontaa cabbiraadda isdhexgalka websaydhka. Si kastaba ha noqotee, isdhexgalkaas muhiim ugama ahan suuqleyda ama xayeysiiyaha.
Aniga oo ixtiraam mudan, Steve, waxaan si farxad leh kuugu sharxi doonaa qadada fiican ee aan ku kala duwanahay aragtidayada!
Tags: Analyticsmuuqaalka bogga
Aadaabta isku xidhka bulshada - Ha noqon SNOB
Home Office kasta wuxuu ubaahanyahay mid!
3, 2006 at 12: 49 AM
Waan kugu raacsanahay halkaas qeexitaanka bogga ayaa isbeddelaya. Way is beddeleysay laga soo bilaabo xilligii fikradda dekedda la fekeray.
Si kastaba ha noqotee, waxaan dareemayaa in cabbiraadaha noocan oo kale ah sida aragtida bogga ay yihiin kaliya dusha. Ugu dambeyntiina xayeysiintu ma shaqeyn doonto sababo la xiriira taraafikada laakiin maxaa yeelay intee in le'eg baa gujisa oo macaamil sameeya. Tani waxay ka dhigan tahay in xayeysiintu ay tahay inay raadiso taraafikada tayada leh oo aysan kaliya taraafikada ahayn.
Nov 1, 2011 saacadu markay tahay 10:37 PM
Waxaan jeclaan lahaa in Steve Rubel uu ila qaato cashadaas!